Nihamahery vaika ny herisetran’ny polisin’i Hong Kong: mpanao fihetsiketsehana voatifitra akaiky · Global Voices teny Malagasy
Polisin'ny fifamoivoizana no nitifitra in-telo tamin'ny mpanao fihetsiketsehana tsy mitam-piadiana
Voadika ny 14 Novambra 2019 18:28 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, українська, Italiano, Shqip, English
Ny lahatsoratra manaraka etoana dia fitetezana ireo andian-tatitra nosoratan'ny mpandray anjara maro ao amin'ny sehatra famoaham-baovao antserasera Hong Kong Free Press tao anatin'ny daty samy hafa. Tafiditra ao anatin'izany: Kris Cheng ao amin'ny 11 of November sy ny 9 of November, Holmes Chan sy Jennifer Creery ao amin'ny 9 of November ary i Holmes Chan ao amin'ny 9 of November. Navoaka tato amin'ny Global Voices araka ny fifanarahana fifampizarana votoaty. Tianay ny mampitandrina ny mpamaky fa ahitana votoaty mahatohina maromaro ny lahatsary amin'ity lahatsoratra ity.
Maro tamin'ny mpiasan'ny fitsaboana no naneho hevitra fa mampiahiahy ny ratra nahazo an'i Chow satria tamin'ny lohany sy ny hatony ny nisy ireo fahatapatahan'ny taolana rehetra. Dokotera iray mpandidy loha no nino fa mety ho efa tsy nahatsiaro tena i Chow tamin'ny fianjerany satria efa-metatra monja ny haavon'ny fianjerany, ary ny fitsambikinana ao anatin'ny fahatsiarovantena dia tototokony hahatonga ny fahatapahan'ny taolana amin'ny tanany sy ny tongony raha amin'ny toe-draharaha mitovy amin'izany.
Tamin'ny 9 Novambra, olona an'arivony no nivory teo ivelan'ny foiben-toeran'ny governemanta mba hisaona amin'ny fahafatesan'i Chow. Nasehon-dry zareo ny finoan-dry zareo fa ny governemanta sy ny polisy misahana ny rotaka no tompon'andraikitra tamin'ny fahafatesany. Mpiasam-birao iray 40 taona no niteny tamin'ny HKFP nandritra ny fiaretan-tory (fandrehetan-dabozia):
Nitombo ny fahatafintohinana raha sambany nahare ny vahoaka fa nisy fanolanana tambabe tao amin'ny tobin'ny polisy taoTsuen Wan tamin'ny septambra. Nanamarina ny polisy fa naharay fitarainana ry zareo tamin'ny 22 oktobra, saingy nilaza fa tsy mpifandraika amin'ny vokatry ny fanadihadiana (famotorana) ny filazana tahaka izany.
Nivoaka an-tserasera aloha tamin'ny voalohany ny antsipirihan'ny fanolanana tambabe, ary avy eo narahana sy navoakan'ny Apple Daily news. Vehivavy 18 taona izay nanao fanalan-jaza tamin'ny 5 novambra tao amin'ny Hopitaly Mpanjakavavy Elizabeta no lazaina ho lasibatra tamin'izany.
Nisy pejy Facebook iray, HA secrets, tantanin'ny mpiasan'ny hopitalim-bahoaka nanaporitsaka fa efa nangonina ny ADN ho porofo hamantarana ny nahavanondoza.
Ny fitsapan-kevitra no naneho fa tsy matoky ny polisy ny ankamaroan'ny vahoaka ao Hong Kong ary nitaky ny hanaovana famotorana mahaleo tena amin'ny fampiasana hery tafahoatra ataon'ny polisy.
Tamin'ny 9 Novambra, niteny mafy i Cliff Stott, iray amin'ireo dimy mpikambana ao amin'ny vaomieran'ny manampahaizana manokana iraisampirenena ho an'ny Filaknevitra Fitarainana Mahaleotena ao amin'ny Polisy (IPCC) Hong Kong ary natsangana hanampy ny IPPC. Namoaka fanambaràna izy tao amin'ny Twitter nilaza fa tsy ampy fahefana ny fomba fiasa amin'izao fotoana izao eo ambany fahefan'ny IPCC, ary nandrisika izy hisian'ny fanadihadiana midadasika kokoa ataon'ny vondrona mahaleotena iray ary manana ny fahefana ilaina amin'izany: